मोबाइल बैंकिङ के हो ? के के छन् सुविधाहरु ? – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । प्रविधिको द्रुत विकाससँगै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विकसित अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा प्रयोग भएको ट्यावलेट बैंकिङ समेत प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । बैँक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नका लागि मोबाइल अर्थात ट्याबलेट बाट नै बैँकिङ कारोबार गर्न सकिने गरि विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरु उपलब्ध गराउने जसलाई मोबाइल बैँकिङ भनिन्छ । मोबाइलबाट नै बैँकमा खाता खोल्ने, पैसा जम्मा गर्ने, खातामा भएको व्यालेन्स हेर्न मिल्ने लगायतका कार्यहरु गर्न सकिने हुँदा बैँकहरुको प्रत्यक्ष पहुँच नपुगेका स्थानका मानिसहरु समेत बैँकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने वातावरण मोबाइल बैँकिङले निर्माण गरेको पाइन्छ । मोबाइल बैँकिङ चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने हुँदा सर्वसाधारणहरुलाई बैँकिङ सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने गर्दछ । समयको बचत समेत हुने हुँदा आजको व्यस्त समाजमा मोबाइल बैँकिङ निकै नै फाइदाजनक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । कतिपय बैँकहरुले मोबाइलबाट गर्ने वित्तीय कारोबारमा निश्चित दायरा बनाएका हुन्छन् ।
नेपालमा २०६१ सालबाट एसएमएस बैंकिङ सेवाको सुरुवात भएको हो । यसको सुरुवात लक्ष्मी बैंकले गर्यो । मोबाइल अर्थात ट्याबलेट बैंकिङकै एउटा रुप हो । यास सेवा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत उनीहरुको खाताको बारेमा जानकारी दिने गर्दछन् । एसएमएस बैंकिङबाट पैसाको कारोबार (लेनदेन) पनि गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा घरमा बसी बसी ग्राहकहरुले यो सेवा प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
मोबाइल वालेटको सुरुवात
मोबाइल बैंकिङकै रुपमा पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएको प्रविधि हो मोबाइल वलेट । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा आईएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी र इसेवा फोन पेले यो सेवा सुरु गरेका छन् । आईएमई र ईसेवाले पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को र प्रभु टेक्नोलोजीले पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) को अनुमति पाएका छन् । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायकको बीचमा मध्यस्तता गरी भुक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फर गर्ने) कार्य गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट अनुमति नीति–०७३ बमोजिम अनुमति पाएका कम्पनीहरुले मोबाइल वालेटको कारोबार गर्नेछन् ।
मोबाइल मनीको अवधारणा
मोबाइल मनीको अवधारणा सबैभन्दा पहिला केन्यामा प्रयोग भएको थियो । सन् २००७ को मार्च महीनामा बेलायती दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोनको केन्याली सहायक कम्पनी सपारीकमले त्यहाँ एम–पेसा सेवा लञ्च गरेको थियो । सफारीकमले एक दशकअघि शुरूमा प्रयोगकर्ताहरूबीच ससानो रकम भुक्तानीका लागि मात्रै यो सेवा शुरू गरेको थियो । तर पछि यसमा फाइनान्सिङ र माइक्रोफाइनान्सिङको सुविधा पनि दिइयो । यस सेवामा सीमापार रकम स्थानान्तरण, कर्जा र स्वास्थ्य प्रावधान समेत समाविष्ट छ ।
केके छन् सुविधा ?
क्यास लेस ट्रान्जेक्शनको आवश्यकतालाई यसले सहजिकरण गर्ने छ । खल्तीमा पैसा पनि बोक्ने कार्ड पनि बोक्ने प्रचलनलाई यो प्रविधिले अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । अहिले एटिएममा गएर पैसा निकाल्ने अनि पसलमा गएर त्यहि पैसाले रिचार्ड कार्ड किन्ने अबस्था छ । तर मोवाइल पेमेन्ट सिस्टमले डिजिटल फाइनान्सको सरल एवं सहज व्यबस्था भित्राउने छ । जसबाट अब नेपालमा पनि मोवाइलमै पैसा बोकेर हिड्न मिल्ने भएको छ । तपाईको मोवाइलमा रकम जम्मा गरेर त्यही रकमबाट विभिन्न सामान खरीद गर्ने तथा स्कूल कलेजको शुल्क तिर्ने, अन्य विभिन्न बिल तिर्ने लगायतका सुविधा पाउन सकिन्छ । सबै बैंकिङ कारोबार मोबाइलबाटै हुने गर्दछ ।